Ukucaciswa kweMveliso ye-200KW ye-Biomass Gas Generator
Ukunqongophala kwamandla okukhoyo ngoku kuya kusiba ngokubonakalayo, kwaye iimfuno zabantu zokhuselo lokusingqongileyo zikwenyuka ngokunyuka.
Njengombane wamandla okulondolozwa kwenethiwekhi yokuhambisa umbane, iiseti zejenreyitha ethe cwaka ziye zasetyenziswa ngokubanzi ngenxa yengxolo yazo ephantsi, ngakumbi kwizibhedlele, iihotele, iindawo zokuhlala eziphezulu, iindawo ezinkulu zokuthenga nezinye iindawo ezinemfuno engqongqo yengxolo yokusingqongileyo ziyimfuneko engxamisekileyo izixhobo.
Ukucaciswa kwemveliso ye-160KW igesi yendalo / i-biogas generator
Umvelisi wegesi wamkela isiseko se-injini ye-injini ye-dizeli ye-HuaBei, egunyazisiweyo yi-DEUTZ. Injini yitekhnoloji yaseJamani.
Iimveliso zoluhlu lwe-NS zisebenzisa i-SDEC injini yesiseko samandla.
Olu luhlu lweemveliso zinokusebenza kwamandla okugqwesileyo, uqoqosho, ukuthembeka kunye neendleko zokusebenza eziphantsi, ezithandwa kakhulu ngabasebenzisi.
Ukucaciswa kweMveliso yeGesi yeNdalo ye-50KW / iBiogas Generator
Imveliso inentsebenzo egqwesileyo, ukusebenza ngokuvuthiweyo nokuthembekileyo kunye nokuthandwa okuphezulu. Imveliso inezibonelelo zokuqala ukusebenza kakuhle, amandla aneleyo, ingxolo ephantsi, ukusebenza okuzinzileyo kunye nokuthembeka okuqinileyo. Isetyenziswa ngokubanzi kwii-biogas, igesi yendalo kunye nakwamanye amashishini.
Ukucaciswa kweMveliso yeGesi yeNdalo ye-30 KW / iBiogas Generator
Ukucaciswa kweMveliso yeJenali ye-10 yeNdalo yeGesi / yeBiogas